Shiinaha ZnSe Soo-saaraha Windows iyo Soo-saare | Dien
Zinc Selenide wuxuu leeyahay nuugista IR oo hooseeya. Tani waxay faa'iido u leedahay sawirka kuleylka, halkaas oo heerkulka walxaha fog laga hubiyo iyadoo la adeegsanayo shucaaca shucaaca madow. Hufnaanta dhererka dhererka dhaadheer ayaa muhiim u ah sawiridda walxaha heerkulka qolka, kaas oo ka baxa dhererka dhererka ugu sarreeya ee qiyaastii 10 μm oo leh xoog aad u hooseeya.
ZnSe waxay leedahay tusmo sarreysa oo soocelis ah taasoo u baahan daahan ka-hortagga milicsiga si loo gaaro gudbinta sare. Dahaadhkeenna ballaadhan ee AR ayaa loogu talagalay 3 μm ilaa 12 μm.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Znse' oo ay sameeyeen kiimikada uumiga uumiga (CVD) asal ahaan ma jiraan nuugista wasakhda, burburka firdhinta aad ayuu u hooseeyaa. Sababtoo ah nuugista iftiinka aadka u hooseeya ee dhererka dhererka 10.6um, sidaa darteed ZnSe waa xulashada ugu horeysa ee lagu sameynayo walxaha indhaha ee nidaamka laser-ka korantada sare leh. Intaas waxaa sii dheer ZnSe sidoo kale waa nooc ka mid ah walxaha guud ee la isticmaalo ee loogu talagalay nidaamka indhaha ee kala duwan ee ku saabsan gudbinta wareegga dhan.
Zinc Selenide waxaa lagu soosaaray iskudhafka Zinc uumiga iyo gaaska H2Se, oo u sameysmaya sida go'yaal kujira xasaasiyado Graphite ah. Zinc Selenide waa microcrystalline qaab-dhismeedka, cabbirka hadhuudhka ee la xakameeyo si loo soo saaro awoodda ugu badan. Hal kristal ZnSe waa la heli karaa, laakiin maahan wax caadi ah laakiin waxaa lagu soo warramey inuu nuugitaankiisu hooseeyo sidaasna uu waxtar ugu leeyahay CO2 optics.
Zinc Selenide wuxuu si weyn u oksidheeyaa 300 ° C, wuxuu muujiyaa cilad caag ah oo qiyaastii ah 500 ° C waxayna kala tagtaa qiyaastii 700 ° C. Nabadgelyada, daaqadaha Zinc Selenide waa in aan loo isticmaalin in ka badan 250 ° C jawiga caadiga ah.
• Ku habboon codsiyada leysarka ee CO2 oo leh awood sare
• 3 ilaa 12 μm broadband IR antireflection daahan
• Wax jilicsan oo aan lagula talinaynin jawiga qalafsan
• Laydh awood sare leh oo hooseeya,
• nidaamka leysarka,
• sayniska caafimaadka ，
• cilmiga xiddigiska iyo aragtida habeenkii ee IR.
• Burbur firidhsan oo hooseeya.
• Si aad u hooseysa u nuugista IR
• Aad ugu adkeysata shoogga kuleylka
• Kala firidhnaan hooseysa iyo isugeyn hooseeya isugeyn
Gudbinta Range: 0.6 ilaa 21.0 μm
Tusmo milicsan: 2.4028 at 10.6 μm
Loss Milicsiga: 29.1% at 10.6 μm (2 dusha sare)
Isugeynta Nuugista: 0,0005 cm-1 oo ah 10.6 μm
Reststrahlen Fiinta: 45.7 μm
dn / dT: +61 x 10-6 / ° C oo ah 10.6 μm at 298K
Cufnaanta: 5,27 g / cc
Barta Dhalaalka: 1525 ° C (eeg qoraalada hoose)
Kuleylka kuleylka: 18 W m-1 K-1 oo ku taal 298K
Ballaarinta kuleylka: 7.1 x 10-6 / ° C markay tahay 273K
Engegnaantiinna: Knoop 120 oo leh 50g indenter
Awoodda kuleylka gaarka ah: 339 J Kg-1 K-1
Jumlada Jumlada (K): 40 GPa
Qalabyada laastikada: Lama hayo
Xadka Xadidan 55.1 MPa (8000 psi)
Kala-baxa: 0.001g / 100g biyo
Miisaanka kelli: 144.33
Fasalka / Qaab-dhismeedka: FCC Cubic, F43m (# 216), Qaab dhismeedka Zinc Blende. (Polycrystalline)